Tue, Jul 14, 2020 at 3:08am
हृदयघात हुनुभन्दा १ महिनाअघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता संकेत
काठमाडौँ, १० साउन । बूढाबूढीलाई मात्र हृदयघात लाग्छ भन्ने होइन । यौवनावस्थामा रहेका व्यक्ति पनि यसको शिकार हुन्छन् । हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै यसको लक्षण देखिन शुरु गर्छ । यसमा ध्यान दिँदा यसको खतराबाट बच्न सकिन्छ। गोडा फुल्ने मुटुलाई शरीरका अन्य अंगमा रगत पु–याउन समस्या आएमा शिराहरू फुल्छन् । यो फुल्नु भनेको हृदयघातको लक्षण हो । ढुकढुकी बढ्नु धेरै दिनसम्म नसा र ढुकढुकी तीव्र..
यस्तो छ हत्केला चिलाउनुको कारण, पढ्नुहोस ...
एजेन्सी, ९ साउन हत्केला शरिरको संवेदनशील अंगमध्ये एक हो। यो सबै भन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अंग हो। त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्छ। हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतासँग पनि जोडिएको पाइन्छ। हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन। हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो वा रोगको संकेत हो। छालाको कोषहरु..
पहिरो विस्थापितको बिचल्ली, राहत पुर्याउन कठिनाइ
काठमाडौँ, ९ साउन । सोमबार रातिको पहिरोका कारण आफ्नो घर छोड्न बाध्य पहिरो विस्तापित परिवारको बिचल्ली भएको छ। जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–३ को ठूलोलुम्पेक सिङ्दीमा पहिरोका कारण ५५ घर परिवार विस्थापित भएका हुन्। उनीहरू आफ्नो घरमा बस्न नसकेर छिमेकी तथा स्थानीय विद्यालयमा शरण लिन पुगेका छन्। पहिरो विस्थापित घरपरिवार ठूलोलुम्पेकस्थित धर्मपुर माविमा बसेका छन्। उनीहरूलाई मंगलबार बिहानदेखि नै गाउँपालिकाले संयुक्त मेस चलाएर..
मनसुन पुनः सक्रिय, देशभर भारी वर्षा
काठमाडौँ, ८ साउन केही दिनदेखि कमजोर रहेको मनसुन बुधबारजबाट पुन : सक्रिय भएको छ । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा तराईमा अवस्थित रहेकाले बुधबार देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा नेपाल प्रवेश गरेको र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय हावाको प्रभावले आज देशको धेरैजसो स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विभुतै पोखरेलले..
तपाईंको फेसबुकमा यी ७ चिज छ ? तुरुन्तै हटाउनुहोस्
काठमाडौँ, ७ साउन आजकल सामाजिक सञ्जाल मानिसहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसको माध्यबाट साथीहरुमाझ हामी आफ्नो महत्वपूर्ण विचार र फोटोहरु शेयर गर्छौ । सामाजिक सञ्जालमा हामीले कुन विषलाई महत्व दिन आवश्यक छ कुनलाई छैन त्यसका बारेमा हेक्का राख्न जरुरी छ । जसले तपाईंलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट सुरक्षित बनाउन सहयोग गरोस् । नराम्रा फोटा हटाउनु होस् तपाईले फेसबुकमा आफूले मात्र हेर्न मिल्ने गरी फोटोहरु..
Results 765: You are at page9of 26